Ingabe i-iPad Pro inesibonakhulu esifihliwe? Kubukeka kanjalo | Izindaba ze-IPhone
Namuhla sikulethela enye yezindaba ezingapheli ukungimangaza njengoba ngibhala. Sazi kahle kamhlophe ukuthi i-Apple ivame ukufihla izici ezithile zamadivayisi ayo, noma kungenxa yokuthi ayikenziwa isebenze okwamanje noma ngoba ayidlulisanga amazinga enkampani Lake futhi ngikhubazekile.
Ngokusobala i-iPad Pro ifaka isici selensi enkulu, into ebesingatshelwanga ngayo futhi engekho empeleni ku-iPhone Pro. Ake sibheke le nto entsha enelukuluku etholakele muva nje futhi ake siqagele ukuthi lokhu kulithinta kanjani ikusasa le-iPad.
Lokhu kusebenza kuqashelwe ngabathuthukisi beHalide, uhlelo lokusebenza lwekhamera elidumile le-iOS elijabulisa izigidi zabasebenzisi emhlabeni jikelele. Kukubhulogi yabo lapho bebone khona ukuthi ikhamera ye-iPad Pro iyakwazi ukugxila emabangeni angaphansi kwamasentimitha amathathu. Uma une-iPhone yakho eseduze, kulula ukuqaphela ukuthi lapho usondelene kakhulu nento ofuna ukuyithwebula, akukho lutho olubonakalayo. Lokhu kungenxa yokuthi ilensi ye-iPhone futhi kuze kube manje i-iPhone ayinalo ikhono lokuthatha izithombe ngefomethi "Macro".
Ngokusobala, futhi ngaphandle kokuthi inkampani yaseCupertino ayishongo lutho ngayo, ikhamera ye-2021 iPad Pro eneprosesa ye-M1 ye-Apple iyakwazi ukuthatha izithombe zefomethi ye-macro, ngakho-ke, emabangeni amafushane kakhulu kunalokho i-2020 iPad Pro uqobo uyakwazi ukuthatha, kubhulogi likaHalide baqhathanise ama-iPads womabili futhi umphumela uyamangalisa. Lokhu ngokungangabazeki kungasho ukufika kwenzwa emikhulu ebangeni le-iPhone 13 elizayo elizofika ekupheleni konyaka.
Izithombe ezisemboze ngezilokotho ngebhulogi likaHalide.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPad » Ingabe i-iPad Pro inesibonakhulu esifihliwe? Kubukeka sengathi kunjalo